HomeWararka CiyaarahaArsenal oo ka fiirsaneysa inay amaah ku qaadato Luka Jovic.
January 25, 2022 Wararka Ciyaaraha, Suuqa kala iibsiga 0
Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay ka fiirsan doonto heshiis amaah ah ay ku doonayso Luka Jovic wararkii u dambeeyay ee suuqa kala iibsiga bisha Janaayo.
Gunners ayaa u muuqata in ay qiratay guuldaradii kasoo gaartay xiddiga Fiorentina Dusan Vlahovic kaas oo loo malaynayo in uu Juventus ugu wareegayo 56.2 milyan gini .
Mikel Arteta ayaa wali lagu soo waramayaa inuu doonayo inuu keeno weeraryahan cusub ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga ee Janaayo, iyadoo Alexander Isak iyo Dominic Calvert-Lewin loo maleynayo inay ku jiraan raadaarka Arsenal
Hadaba, The Athletic ayaa ku warameysa in Real Madrid ay ka hartay Jovic ay tahay dookh kale oo macquul ah, iyadoo Gunners laga yaabo inay diyaar u tahay inay ka fiirsato heshiis amaah ah oo ay ku soo qaadato ciyaaryahankii hore ee Eintracht Frankfurt.
Warbixintu waxa ay intaa ku dartay in Jovic uu dhamaystiray caafimaadkiisa iyo ciyaartiisa isku xidhka ay soo jiiteen indhaha Arsenal, laakiin kuwa gudaha jooga ayaa ka walaacsan heerka shaqada difaaca ee 24 jirkan.
Jovic ayaa ku guul daraystay in uu sumcadiisa ku soo bandhigo Bernabeu tan iyo markii uu yimid xagaagii 2019 – waxa uu dhaliyay kaliya 3 gool 47 kulan oo uu saftay – mana uusan bilaaban hal kulan xilli ciyaareedka 2021-22 ee La Liga.
Jovic ayaa dhaliyay hal gool iyo laba caawin 15 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan waxana uu heshiis kula jira kooxda Real Madrid ilaa xagaaga 2025.